Etu ị ga - esi nweta azụmahịa gị site na nsogbu na Semalt?
Na oge mmepe Internetntanetị na mmetụta na-abawanye uru, ịdị adị nke azụmahịa na-efu ma na-aga nke ọma enweghị atụ n'emeghị mkpokọta weebụ gị. Agbanyeghị, ekwesighi ịmepụta saịtị naanị kamakwa ọ na-arụ ọrụ nke ọma na ndị ahịa na ndị asọmpi ịchọpụta ya ngwa ngwa. SEO nke weebụsaịtị ga - ahapụ gị wepụta ụlọ ọrụ gị na nsogbu ma dọta ntọala ndị ahịa ọhụrụ.
Azụ ahịa ọchụchọ dị ka ihe bara uru gụnyere SEO dị n'ime, njikarịcha nke mpụga, na SERM, nke pụtara ịrụ ọrụ na aha ụlọ ọrụ na ntanetị. Operationsrụ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha ga-enyere aka ịdọta ndị ahịa, ndị ọrụ, ma ọ bụ ndị mmekọ; melite aha ụlọ ọrụ n'etiti nsonaazụ ọchụchọ; mụbaa ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa ngwongwo ma ọ bụ ọrụ; nwekwuo ntụkwasị obi nke ndị na-ege ntị lekwasịrị anya; gbaa mbọ hụ na ụdị erute ruru.
Ya mere, saịtị ahụ ọ bụghị naanị na-abawanye okporo ụzọ mana ọ na-amalitekwa iso ndị ọbịa rụọ ọrụ nke ọma.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ Semalt?
Maka onye ọrụ, oge mbụ echere na nkwalite SEO nke saịtị, ọ na-esiri ike ịhọrọ n'etiti ọtụtụ ohere SEO ka a na-enye. Ọ bụrụ na ọtụtụ nde akụ ịntanetị siri ike gbochiri saịtị gị ịnweta ogo ogo Google, ọ bụrụ na okporo ụzọ saịtị ahụ ka dị ala, n'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke ndị ahịa nwere ike ịbụ, Semalt ga-agbasa azụmahịa gị n'ọkwa ọzọ.
Chọpụta Semalt dị ka ahịa ọkachamara na Ọrụ Nchọpụta Ọchụchọ Ọkachamara, nke ga-aghọ otu n'ime ngwaọrụ kachasị dị mma maka ịzụlite akụ gị n'ịntanetị. Usoro nkwalite ụlọ ọrụ anyị ji eme ihe zuru ụwa ọnụ ma dabara adaba maka ụdị azụmahịa dị n'ịntanetị niile. Nchọpụta ihe nyocha Semalt ga - enyere gị aka igosipụta oge niile nke ndị ọrụ ntanetị ezubere iche na saịtị ahụ. Nke a bụ n'ihi na ọganihu nke enwere ike nweta site na njikarịcha anaghị akwụsị, yabụ saịtị a ga-aga n'ihu na-enweta okporo ụzọ ọbụlagodi kwụsịchaa ọrụ SEO enyere.
Semalt ga - enyere gị aka ịchọpụta isi mmalite okporo ụzọ kachasị dị na Internetntanetị. Ebe ọ bụ na ọ dịkarịa ala, ọkara nke ndị nleta saịtị niile sitere na ngwa ọchụchọ.
Site na Semalt, ị ga-adọta ndị ọbịa nwere mmasị, ndị na-abịa na ntanetị site na inyocha ọchụchọ iji chọọ gị, ọrụ gị, ngwaahịa ma ọ bụ ozi.
Ọ dịkwa mma ịtụle na okporo ụzọ ọchụchọ a na-akwụghị ụgwọ! Dokwesighi ịkwụ ụgwọ maka clicks ma ọ bụ jikọtara na ebe nrụọrụ weebụ gị na ibe nsonaazụ ọchụchọ.
Ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe gị na iji duzie njikwa akụ kachasị mma, achọrọ otu ndị ọkachamara na ihe karịrị ọnwa otu ọrụ, anyị ga-ewepụ obi abụọ gị. Ndị ọkachamara anyị ga-eburu n'uche ihe ị chọrọ ma rụchaa ọrụ ahụ ozugbo enwere ike. Na mgbakwunye, mkpa ịwelite data oge niile na saịtị ahụ na iwelie ibu njikọ njikọ a na-echebara.
Maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ ha na-enweghị ike ikpebi n'ihu nke ọrụ azụmaahịa dabere na atụmatụ azụmaahịa nke ụwa ha, Semalt ga-enyere aka na nhọrọ nke mpaghara ndị dị mkpa. Nke a ga - elekwasị anya na mbọ nke ndị ọkachamara SEO na ndị ahịa n’otu ọrụ ma nweta arụmọrụ kachasị.
Semalt ga - enyere gị aka na:
Ka anyị gaa n'ihu na mkparịta ụka zuru ezu banyere ọrụ ị nwere ike ịchọpụta na Semalt.
Site na itinye uche gị na imepụta ogo dị elu n'akụkụ niile nke weebụsaịtị, ị nwere ike chefuo ịdị adị ya. Maka ndị mbido n'ọhịa nyocha kachasị, anyị na-ebido mkpọsa AutoSEO, nke na-egosi nsonaazụ dị mma na obere oge.
Can nwere ike iji ọrụ a kwalite ọrụ aka gị ma ọ bụ kwalite ọrụ ndị ahịa. Agbanyeghị, n'agbanyeghị mmasị onye ahịa, AutoSEO na-enye njikarịcha peeji dị elu. Dabere na nchọpụta isiokwu na akụkọ nyocha weebụ, mkpọsa a ga - enyere gị aka ịkwalite ọhụụ saịtị ma wuo njikọ.
N'otu oge ahụ, ọ bụ ọrụ ya na igodo ya nke dị oke mkpa maka SEO. Planninghazi isiokwu ga - enyere gị aka ịhọrọ nkebi ahịrịokwu, nke kachasị mma maka saịtị gị.
Ihe a na-enye ga-aba uru nke ukwuu maka ndị webmasters, ndị nweere onwe ha, ndị nwere obere azụmaahịa, na mmalite.
Youkọwapụtala ihe ndị ị na-ebute ụzọ na ebumnuche ahịa uto, uru na mmekọrịta gị na ya ga-erite? Mgbe ahụ, FullSEO zuru oke maka gị. Ọ gụnyere mmepe na ntinye nke atụmatụ a kapịrị ọnụ nke onye ahịa maka SEO na nkwalite na Net. Ntinye uche na nkọwa na nghọta nke njirimara nke ndị ahịa ga-enyere gị aka ịzụlite atụmatụ nkwalite saịtị kachasị dị irè.
Enwere mmasị na ọrụ gị ma ọ bụ ngwaahịa ndị ahịa ga-eduga gị na saịtị gị, nke, n'aka nke ya, ga-adị nnọọ nso na elu na igwe nchọta.
Isi ọrụ nke mkpọsa a bụ:
FullSEO kachasị dị irè maka omume azụmaahịa na azụmaahịa elektrọnik. Agbanyeghị, na-elekwasị anya n'otu ahịa na-eme ka mkpọsa a baa uru maka mmalite, ndị ọchụnta ego nke onwe ha chọrọ iji weebụsaịtị nke ha karịa akarị.
Ọ dịghị onye ọ bụla nwere mmasị ịkọwapụta nkọwa dị ogologo na mgbagwoju anya nke ngwongwo, ọrụ, ụlọ ọrụ. Naanị gosi ndị ahịa gị ihe ị nwere ike ime site na iji vidiyo na-akọwa ihe ndị ọkachamara Semalt mepụtara. Naanị kọwaa echiche gị n’okwu ole na ole, anyị ga-enyere gị aka ịmepụta ihe nkiri nke na-egosipụta usoro mmepụta, ụkpụrụ nke ụlọ ọrụ na-anọchite anya ogo ọrụ ị na-enye na ngwaahịa ị na-emepụta. Missiondebe ozi n'ụdị usoro mgbasa ozi ga-eme ka nghọta ya dịkwuo mfe ma mee ka ndị ahịa kerịta ndị ọzọ ihe ha hụrụ.
Ndị otu Semalt ga - ebido mmepe nke echiche ahụ, ide edemede ahụ, na - enyocha mmepụta vidiyo, ọrụ ọkachamara, na idezi ya.
Ọrụ a dị mkpa karịsịa maka ndị nwere obere azụmaahịa, mmalite, yana ụlọ ọrụ ndị chọrọ ịmasị ndị na-ege ntị na ebumnuche ha.
Ihe omumu banyere ihe omuma banyere ihe omuma banyere ihe omuma banyere ya na ihe omuma nke oma. Nyochaa ndị ahịa chọrọ ma nye ha kpọmkwem ihe ha chọrọ. Legide ọganihu na arụmọrụ nke ụlọ ọrụ na-asọ mpi, chọpụta ihe nzuzo nke ihe ịga nke ọma ya, ma mejuputa nyocha ndị enwetara. Nchịkọta Weebụsaịtị anyị ga-eme ka ị mata ihe niile gbasara arụmọrụ na arụmọrụ nke saịtị gị.
ọrụ maka ịlele ọkwa ịntanetị gị,
na-achọpụta njehie njikarịcha peeji
na-anata mkpokọta weebụ zuru oke
na-abawanye visibiliti web na web.
Onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịme ezigbo ihe nke nyocha weebụsaịtị n'ihi na ihe ọmụma bụ ngwaọrụ kachasị ike n'aka gị.
Ọ bụrụ na imepụta saịtị dị ka ọ nweghị ihe mgbagwoju anya karịa nkwalite ya, Semalt ga - enyere aka na ọrụ a! Dịka ndị ọkachamara na ngalaba anyị, anyị ga-emepụta weebụsaịtị nke kwesịrị gị. Ma ọ bụ ụlọ ahịa n'ịntanetị, ụlọ ọrụ aka nka, ụlọ ọrụ buru ibu, ma ọ bụ ndị ọrụ n'otu n'otu - ndị ọkachamara ga-emepụta ngwaahịa kacha mma na-egbo mkpa na ọchịchọ nke onye ahịa.
Ntuziaka maka oghere ịntanetị ugbu a na-agbanwe weebụsaịtị ka ọ bụrụ kaadị azụmahịa nke ụlọ ọrụ, ihu ya. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ilekwasị anya ọ bụghị naanị na njirisi ihe nchọta nke ihe ntanetị kamakwa na imebe peeji nke ọma. Anyị na-ejikwa nchekwa data dị elu n'oge mmepe nke saịtị. Mgbe mmalite nke ọrụ ya, a ga-anakọta ozi ahụ, hazie ya, wee nye ya ụdị akụkọ. Yabụ, ị nwere ike ijikwa ọrụ nke ihe omume gị site na mmalite.
Andrụ ọrụ na ọmarịcha ọrụ, nkwado na mmelite oge niile, ntinye ọnụ nke plugins na API, mmezu nke ngwọta cms - Semalt ga-eme ya.
Weebụsaịtị nkwalite SEO
Na ọkwa mbụ nke ọrụ na mkpokọta weebụ, ị ga-achọ nkwado nke ndị ọkachamara nwere ahụmahụ. Anyị ga-eji nkà anyị, nweta ọtụtụ afọ nke omume dị omimi, iji duzie gị na nkwalite saịtị gị. Otu ngwugwu zuru ezu nke ọrụ maka iji nyochaa ihe ngosipụta nke ibe weebụ dị ugbu a na ihe ntanetị, ịlele nsogbu na idozi ha, ịhazi ma dozie weebụsaịtị bụ ihe ịchọrọ ma ga - esi n'aka anyị.
Uru nke ọrụ anyị:
Otu ndi okacha amara dị njikere maka imekọ ihe ọnụ awa 24 kwa ụbọchị, ụbọchị 365 kwa afọ. Ndị ọrụ anyị nwere ọtụtụ ndị ọkachamara ruru eru na-asụ Bekee, German, French, Spanish, na Turkish. Site na ịkpọtụrụ ndị na - ede akwụkwọ, ndị mmemme, ndị na - emepụta ọdịnaya, ndị mmepe nke saịtị ma ọ bụ ọbụna ndị isi nke ụlọ ọrụ ahụ, ị nwere ike ijide n'aka na a ghọtara gị ma nwee ike itinye ego na ndụmọdụ gbasara okwu ọ bụla;
Ruo ihe karịrị afọ iri, ndị ọrụ mmekọrịta anyị enwetala site n'aka ndị ọkachamara nwere onyinye, ndị na-eme ihe ike ma na-akpali akpali, bụ ndị mejupụtara ọtụtụ ọrụ na-aga nke ọma. Afọ nke omume na-aga n'ihu na mkpokọta ahụmịhe ahụ enyerela ndị ọkachamara aka ịmara ma zụlite usoro pụrụ iche nke njirimara netwọkụ pụrụ iche.
Ihe karịrị ọrụ 800,000 na-aga nke ọma, ndị ọrụ 300,000 nwekwara afọ ojuju n'ịdị mma nke ọrụ anyị;
Ihe ngosi nke oru ndi emechara bu ihe omuma nke ihe oma nke Semalt n’ime mmezu nke aka ya, na nyocha nke ndi ahia juru eju.
Mgbanwe usoro mgbanwe na inye onyinye mara mma mgbe niile; kacha mma mma-ọnụahịa ruru. Inwere onwe gị ịhọrọ ọrụ ndị masịrị gị naanị dabere na ego gị na usoro ịme atụmatụ gị. Anyị na-enye usoro dị mma maka ego na uru bara uru maka ndị ahịa mgbe niile. Maka naanị $ 0.99, ịnwere ike ịnwale ọnụọgụ abụọ nke AutoSeo wee hụ ụdị atụmatụ ndị kachasị amasị gị. N'okwu a, agbanyeghị ma ị họrọ AutoSeo, FullSEO ma ọ bụ nyocha, ọnwa atọ, ọnwa isii, yana nchịkọta nke afọ a ga-ewetara gị uru nke 10, 15, na 25%, n'otu n'otu.
Ihe mere ị ga-eji gaa na weebụsaịtị anyị
Na saịtị anyị, ị nwere ike ịghọta usoro Semalt na nyocha ndị ahịa iji ghọta ọ bụghị naanị nkọwapụta nke SEO kamakwa njirimara nke nkwalite mkpokọta weebụ anyị. Can nwekwara ike ịchọta ozi niile dị mkpa gbasara ọrụ enyere na ọnụ ahịa ha na weebụsaịtị Semalt. Ọ bụrụ n’isiokwu ọ bụla edozighi maka gị, jụọ ajụjụ maka ndị otu na-akwado anyị.